Ihe ihe ndi ahia choro iji mee nke oma na ntanetị | Martech Zone
Ihe ndị ahịa chọrọ iji mee nke ọma na ntanetị
Narị afọ nke 21 ahụwo ntoputa nke ọtụtụ teknụzụ nke na-enyere anyị aka ịzụ ahịa azụmaahịa n'ụzọ gara nke ọma na ụzọ jikọtara ọnụ ma nwee mmetụta karịa oge gara aga. Site na blọọgụ, ụlọ ahịa ecommerce, ahịa ahịa n'ịntanetị na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta, weebụ abụrụla ebe ọha na eze na-enye ndị ahịa ihe ịchọ ma rie. Na nke mbụ, Intanet emeela ohere ọhụụ maka azụmaahịa dịka ngwaọrụ dijitalụ enyerela aka ịhazi ma mee ka mbọ ahịa azụmaahịa gafee ọtụtụ nyiwe.
Mana dị ka onye na-ere ahịa na afọ dijitalụ, ọ nwere ike ịba ụba na ebe ị ga-amalite mgbe ọ bịara ịchọpụta ebe ndị ahịa gị nọ na otu esi ejikọ ha.
Ractdọta mmasị ndị ahịa na-esiri ike karịa ka ọ dị na mbụ ka a na-agbasa nlebara anya n'etiti ọtụtụ ọwa, ngwaọrụ, na nyiwe. Iji mee ka ọ sikwuo ike, ozi mgbasa ozi ọdịnala anaghịzi adị irè. Ndị ahịa chọrọ ozi dị mkpa na-erute ha site na usoro ha họọrọ ma nyefee ya dị ka mkparịta ụka. Mike Dover, onye na-ede akwụkwọ WIKIBRANDS: Reghachite Companylọ Ọrụ Gị na Ahịa-Achụpụ Ahịa
Site na nhọrọ na-enweghị ngwụcha dị na ,ntanetị, ọ siri ike ịkọwapụta ihe ndị ọ dị mkpa ka ịme iji wulite atụmatụ ntinye aka nke ndị ahịa iji nyere aka wulite azụmahịa gị. Mana ọ gbadata iji chọpụta ihe omume gị ga - abụ. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịmepụta atụmatụ ọ bụghị naanị ịdọta ndị ahịa, mana ịmepụta mmekọrịta dị ogologo oge na-ewuli elu na nghọta na ntụkwasị obi na n'aka nke ya ga-eweta azụmahịa na iguzosi ike n'ihe ụdị.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ndị na-ere ahịa otu esi ewulite usoro ịzụ ahịa na-aga nke ọma:
Chọpụta Newdị Ọhụrụ nke Ahịa
Kama itinye mmefu ego gị niile na ahịa ọdịnala dịka mgbasa ozi na-ebipụta ma ọ bụ mgbasa ozi redio na telivishọn, lekwasịkwa anya na ọwa ahịa ahịa dijitalụ ga-enyere azụmahịa gị aka itolite n'ịntanetị. Mgbakwunye ahịa jikọtara usoro ochie nke mgbasa ozi na teknụzụ nke oge a site na mkpọsa ahịa email, ịde blọgụ, na ntanetị mgbasa ozi dịka Facebook ma ọ bụ Twitter. Ndị ahịa nke oge a na-agafe n'ịntanetị iji jikọọ na ụdị. Azọ ndị a anaghị enyere gị aka imeziwanye iru gị, kama ọ ga-eme ka ị nwekwuo ohere ijikọ ọnụ na ndị na-ege ntị.
Mepụta Usoro Ọdịnaya Dị Mkpa
Iwulite ọnụnọ dijitalụ bụ ịhapụ ịhapụ akara dijitalụ na ndị ahịa nwere ike ịchọta ya. N'ahịa taa, 70% nke ndi ahia ahọrọ ịmara ụlọ ọrụ site na ezigbo ozi karịa mgbasa ozi. Bido iwulite mmekọrịta ka mma site na nghọta na ntụkwasị obi site na ịmịpụta ọdịnaya dị mkpa. Ndị ahịa na-achọ ihe ọmụma mgbe niile n'ịntanetị na kama ịmepụta ọdịnaya maka ịmepụta ọdịnaya, gbado anya na ụlọ ọrụ gị na isiokwu ndị na-arụ ọrụ. Ọ bụghị naanị na ị na-abawanye ikike ịchọta gị n'ịntanetị site na ọdịnaya dị mkpa, kamakwa ịmebe aha gị dị ka onye nwere ntụkwasị obi. Tinye uru karịa na ọdịnaya gị site na ịgbakwunye ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ dị ka foto, vidiyo, na pọdkastị - nke a ga - eme ka ị nwekwuo ohere ịchọta gị n'ịntanetị site na ịnye ozi bara uru maka ndị ahịa dị na ndị nwere ike.
Soro Mkparịta ụka ahụ na ndị ahịa gị
Nkwurịta okwu na ndị ahịa gị bụ isi. Ma ọ bụ azịza dị mfe na Twitter, ịza ajụjụ ha site na nkwado ndị ahịa, ma ọ bụ nye ha nkwekọrịta onwe maka iguzosi ike n'ihe ha, itinye aka dị ezigbo mkpa mgbe ị na-eme mmekọrịta dị ogologo oge na ndị na-azụ ahịa. Ndị ahịa nwere ike na mmetụta karịa ka ha nwere tupu Internetntanetị emeela ka olu ha nụ ka a nụ ya site na mgbasa ozi mmekọrịta, ọgbakọ na nyocha. Ige ndị ahịa ntị na ijikọ ha na-enye ndị ahịa ohere ịghọta ihe obodo ga-abanye na ya na mkparịta ụka ha kwesịrị ịbụ akụkụ ya.
Nyochaa Mgbalị Mgbasa Ozi Gị
Iji ghọta otú usoro ọdịnaya gị na-arụ nke ọma, ị ga-enyocha nọmba. Site na nkowa nchịkọta, ị nwere ike nweta nghọta na blọọgụ na-aga nke ọma, ihe ogo gị niile bụ, yana akụkụ ndị ịkwesịrị imeziwanye. Nchịkọta dị mkpa mgbe ị na-ekepụta usoro ịre ahịa dijitalụ dị irè n'ihi na ka oge na-aga, ị ga-enwe ike ịkọwa ihe omume ga-eme, ụdị ụdị mgbasa ozi na-anabata ndị na-ege gị ntị, yana ọwa ahịa ndị kacha arụ ọrụ maka azụmahịa gị.
N’enweghi usoro ntinye aka nke dijitalụ dijitalụ, ndị na-ere ahịa ga-aga n’ihu na-abanye na oghere mgbe ọ bịara n’iwupụta akara ha. Kama ilekwasị anya na mgbasa ozi nke a na-eme ka ndị ahịa nwee, ndị na-ere ahịa taa kwesịrị ime mgbanwe n'ime mpaghara dijitalụ ma wuo atụmatụ dị ogologo oge dabere na njikọ aka nke na-adọta ndị ahịa.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ na-amalite site na ịmepụta usoro ịzụ ahịa ọdịnaya dị omimi yana ịchọpụta ihe ngwaọrụ na ọwa ahịa dị mkpa iji kesaa ma kesaa. Ntughari nke ihe omuma ihe omuma, mgbasa ozi ndi mmadu na nchịkọta dị mkpa maka ịga nke ọma n'ịntanetị ma ị bụ nnukwu ụlọ ọrụ, obere azụmaahịa, ma ọ bụ ọbụlagodi ọchụnta ego. Njikọ aka na-ewulite mkparịta ụka nke na-amalite site na nghọta site na ịzụ ahịa ọdịnaya, na-enyere ndị ahịa niile aka ịchọta gị n'ịntanetị site na nyocha ọchụchọ nke jikọtara na saịtị gị.
Marketlọ ahịa taa na-achọ ụdị niile ka ha nwee asọmpi dijitalụ na ndị na-ere ahịa ghọtara na ọ dị mkpa ka ha nwee afọ ojuju, ndị na-azụ ahịa na data a na-achụ bụ ndị ga-eme ka ụdị ha nwee ọganiihu.
Tags: usoro ahia ahiaatụmatụ ọdịnayamkparịta ụkaahịaakara ukwu dijitalụọnụnọ dijitalụFacebookFacebook Marketingholonisnjikọ ahịaahịa ụdịdịire ahia ahiaihe ịga nke ọma n'ịntanetịọdịnaya dị mkpamkparịta ụka nke mmekọrịta mmadụ na ibe yaTwitterAhịa Twitter
N'ime ọrụ ya ugbu a, Richard Hollis bụ onye nwe, onye nchoputa, na onye isi nke Holonis Inc., nke dabeere na San Diego, California. Ha na nwa ya nwoke, Hayden Hollis, jikọrọ ụzọ ha abụọ wee mepụta usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta zuru oke nke mbụ, dabere na nghọta na ụkpụrụ nke holons, echiche bụ na azịza ya bụ otu akụkụ yana otu. Holonis na-enye ndị azụmaahịa niile ogo dị iche iche na teknụzụ jikọtara ọnụ nke na-atọ ụtọ, dị mfe ma dịkwa ọnụ ahịa iji mee ihe, ebumnuche n'uche bụ ịkọwapụta na ịmalitegharị akụ na ụba maka ndị ọrụ niile na-ebute ụzọ na-agbanwe ngwa ngwa na ntanetị.
Ebumnuche 7 iji mejuputa Nsuso oku na nchịkọta
LeeMkpebi: Heatmaps na Real-Analytics
Christoph C. Cemper - Mmetụta
Jul 3, 2015 na 6: 10 AM
Nyochaa mbọ m na - agba n’ahịa na - enyere m aka bụ ihe kachasị m mkpa maka na achọghị m itinye ego na ume na ihe anaghị arụ ọrụ ọ kachasị ma ọ bụrụ na m nwere nhọrọ inyocha ya iji zere nke ahụ.
Kedu ihe dị mkpa, ma ị kpọtụrụ nke ahụ, na-emepe atụmatụ ọdịnaya dị mkpa. Site n'echiche m, nke ahụ chọrọ ịghọta ahịa gị na ihe na-arụ ọrụ, na ihe kpatara ya. Ugbu a na-ele anya na akara ngosi mmekọrịta (Facebook, Twitter) bụ otu ihe dị mkpa, mana achọtara m ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-ahụkarị yana ahụike, teknụzụ, iwu wdg na-abụghị "ezigbo mma" maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke ahụ bụ eziokwu. Mana ahia ọdịnaya na-emekwa ebe ahụ, ị ​​hụghị ya site na ilele naanị mkparịta ụka mmekọrịta. Ọ bụ ya mere m ji wuo sọftụwia ọhụrụ m iji nyochaa akara Buzz sitere na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana akara ngosi mmetụta (dị ka ezigbo onye ọrụ na-etinye aka na nkọwa, echiche, clicks, njikọ)
A na-akpọ ngwaahịa ahụ Impactana (http://www.impactana.com/ ) Ma ọ na-agwa m kpọmkwem ihe m kwesịrị ịma iji hụ ụdị ọdịnaya arụ ọrụ n'oge gara aga maka ụlọ ọrụ ọ bụla, ọbụlagodi na ọ bụghị ihe a na-enyo enyo ”(ya bụ, ọdịnaya nke pusi ịrịa). M na-ahụkwa ma ọ bụrụ na azụmaahịa ọdịnaya m gara nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ na-egosikwa m ihe ịzụ ahịa ọdịnaya na-aga nke ọma dị ka ọ bụ nke m ma ọ bụ nke onye asọmpi m ka m wee nwee ike iji nke ahụ dịka omume kachasị mma iji wuo ya. Eleghị anya ịchọrọ ịlele iji hụ nhọrọ niile n'onwe gị ma mee ka m mara ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ bara uru. Ọ ga-adị mma ịnụ n'ọnụ gị.
Jul 3, 2015 na 9: 22 AM
Daalụ Cristoph! Aga m na-enyocha ya.